Tianjin Golden Hugeline Co., Ltd itholakala e Tianjin, China. Le nkampani ihlanganisa indawo ka 12000 square metres, kanye workshop ahlanzekile ihlanganisa ezingaphezu kuka 4800 square metres. Kukhona 85 abantu abasebenza e inkampani yethu, kuhlanganise nokuphathwa kwabasebenzi (10 abantu), abasebenzi professional futhi lobuchwepheshe (8 abantu), umdayisi abasebenzi (20 abantu), opharetha (10 abantu).
UMnyango ukuthekelisa nkampani yasungulwa ngo-2010, futhi inhloko-dolobha bhalisiwe kuyinto 3000000 yuan. singamalungu iqembu lochwepheshe lapho abacwaningi, eba, ukhiqiza futhi udayisa izinhlobo eziningi filters.we babe Imigqa emibili ukukhiqizwa PU lemifanekiso, kuhlanganise 6 ezinkulu zokukhiqiza umjovo udini imigqa, 8 imvelo zokukhiqiza imigqa, iqoqo imishini laboratory, cleaner zokuhlanza nezinye professional 20 imishini yokukhiqiza. Inkampani yethu ine-ISO 9001 certification.We ukuqinisekisa ukuthi izihlungi zethu kahle kakhulu bayojabulela izinga ozinzile futhi ngamanani ezifanele.
Thuthukisa isiko zeMisebenzi, ukuPhathwa isitayela ngibonise, Thuthukisa ukuphathwa, ukunweba kuhlotshaniswa brand, A umsindo ukumaketha uhlelo, ukuphepha kanye nentuthuko eqhubekayo.
Customer ngamakhasimende, ukumaketha sikhungo; ukuphathwa Brand imodi wokusebenza.
centric Product-, umkhiqizo okuhlukahlukene, kudalwa GHL brand image
Inkampani yethu ikakhulu ukhiqiza i-Toyota, Honda, BMW, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Scania, Volvo, Iveco njll, enikela inkonzo amakhasimende ezifuywayo angaphandle emakethe ukuhlinzeka imikhiqizo izinga .Product izinhlobo zihlanganisa: Air isihlungi; fuel isihlungi; uwoyela isihlungi; gumbi isihlungi; isihlungi ezimbonini.
Imikhiqizo yethu ikakhulu ukuthengisa kahle Korea, eJapan, Turkey, Dubai, e-Europe, South Africa, e-Australia, neNingizimu-mpumalanga Asia (Malaysia, Hong Kong, futhi endaweni Taiwan). Abathengi wamukelekile ukuba uxhumane nathi.
Zonke abasebenzi enkampanini amakhasimende ami wamukelekile abavela kulo lonke elase inkampani world.Our uyawuthanda imikhiqizo izinga, amanani ezifanele kanye service enhle. Thina ngobuqotho ngethemba ukungena ubudlelwano ibhizinisi namakhasimende ekhaya aphesheya.
Igumbi, 1702, lwezezimali emgwaqweni maphakathi Isakhiwo, Dagu bei umgwaqo, Heping wesifunda, Tianjin, China.